Ezi zezona zinikezelo zibalaseleyo zangoNovemba 11 kwiGearBest | Iindaba zeGajethi
Ezi zezona zinikezelo zibalaseleyo zangoNovemba 11 kwiGearBest
Kungekude kudala abantu abaninzi eSpain nakwamanye amazwe amaninzi kwihlabathi jikelele bebengazi ukuba yintoni uLwesihlanu oMnyama okanye uLwesihlanu omnyama. Lo mbhiyozo kwasekuqaleni usuka eUnited States, nalapho iivenkile ezibonakalayo kunye nezo zithengisa khona kungekudala, zisinika izaphulelo ezimnandi kunye nezibonelelo zokufumana inzuzo ngaphambi nje kweKrisimesi.
Enye yale mibhiyozo yi Usuku lweeNgoma, olubhiyozelwa nge-11 kaNovemba kwaye kwesi sihlandlo kubhiyozelwa e-China. Okwangoku ayaziwa njenge-Black Friday, kodwa ukwandiswa kwayo sele kungathinteleki kwihlabathi liphela, ngakumbi ngenxa yevenkile ezininzi zaseTshayina ezithengisa iimveliso zazo ngenethiwekhi yenethiwekhi. Omnye wabo ngu IGearbest, apho namhlanje siza kuvavanya ezona zinto zibalaseleyo zalo mbhiyozo.
Ukuba awuzange uve ngeSingles Day, ungakhathazeki kuba okokuqala siza kukuxelela ulwazi oluninzi ukuze uqonde kwaye uqonde lo mbhiyozo usasazekayo.
1 Yintoni uSuku lweeNgoma olubhiyozelwa minyaka le nge-11 kaNovemba?
2 Isebenza njani iGearBest yokujongana nomsitho woSuku lweeNgoma?
3 Ezi zezinye zezona zinto zibalaseleyo zeGearBest
4 Iingcebiso zethu
Yintoni uSuku lweeNgoma olubhiyozelwa minyaka le nge-11 kaNovemba?
Usuku lweeNgoma yiholide leyo Ibhiyozelwa nge-11 ka-Novemba kunyaka ngamnye e-China nakwamanye amazwe ase-Asiya anjenge Taiwan okanye uMzantsi Korea Kwaye isasazeka ngesantya esikhulu ngakumbi kwamanye amazwe amaninzi kwihlabathi liphela.
Olu suku lwenziwa phakathi kwiminyaka yee-90 liqela labafundi baseyunivesithi abavela eNanjing, isixeko esikhulu saseTshayina, ababengatshatanga. Injongo yabo bonke yayikukukhusela ukungatshati kwabo, ngokuzingca ngako, ngaphandle kokuhlala kwinkcubeko apho umtshato uxabiseke kakhulu.
Umhla okhethiweyo wawungeyonto nje eyenzeka ngengozi kwaye yiyo loo nto Iqukethe ezine, umzobo obhalwe ngesiTshayina utolikwa njengemithi engenamagqabi kwaye loo nto isetyenziswa kwizihlandlo ezininzi njengesikweko kubantu abangatshatanga.
Idayi yayo yorhwebo yavela ngo-2009 isuka eAlibabá, enye yezona ngxilimbela zorhwebo lwe-elektroniki zehlabathi kunye neendawo zayo ezimbini ezaziwayo ezifana neTaoBao kunye neTmall. Ukuhamba kweminyaka kuye kwalungiselela lo mbhiyozo ukuba uthathwe njengowona ubalulekileyo, ugqitha uLwesihlanu oMnyama, uMvulo weCyber ​​okanye uSuku lweManqindi. Ewe kunjalo, ubuncinci okwangoku udumo lwayo alukho kwihlabathi liphela kwaye uninzi lwempumelelo yalo luhlala kuphela kumazwe aseAsia.
Isebenza njani iGearBest yokujongana nomsitho woSuku lweeNgoma?
Izibonelelo esiza kuzifumana kwivenkile edumileyo yamaTshayina ziya kwahlulwa zibe ngamacandelo amabini ahlukeneyo. Kowokuqala, nawuphi na umsebenzisi angabona Iibhubhu ezibomvu ezibonakala kwiphepha lewebhu xa siyikhangela kwaye iya kuba zizaphulelo kwiimveliso ezithile okanye iimveliso. Eli nqanaba liza kuqala namhlanje, nge-7 kaNovemba, kwaye ngeli xesha siza kuba nakho ukuqokelela amatikiti.
Ezi coupon sizifumanayo zinokusetyenziswa ukusuka kumzuzu zifunyenwe okanye zilinde inqanaba lesibini. Njengengcebiso evela kwinto ebikhe yahlala eminye iminyaka, elona xesha lilungileyo lokusebenzisa amakhuphoni nguNovemba 11, umhla esinokufumana kuwo ezona zinto zinomdla.
Eli nqanaba lesibini linqanaba elibhaptiziweyo njengokuthengisa, kwaye oko izakuqala nge-9 kaNovemba kude kube ngu-15 Novemba. Ezi ntsuku ziya kuba zezona zifanelekileyo ukusebenzisa amatikiti afunyenweyo kwaye izaphulelo kunye nezaphulelo ziya kuba nkulu kakhulu kumanqaku amaninzi.
Ezi zezinye zezona zinto zibalaseleyo zeGearBest
Emva koko siza kukubonisa ezinye zeyona misebenzi ibalaseleyo kwiGearBest, nangona ukuxhamla kubo khumbula ukuba kufuneka ubenamakhuphoni onokuthi "uzingele" ngokukhangela iwebhusayithi yevenkile yaseTshayina.
Njengoko besesikuxelele, ezi zezinye zezinto esinokuzifumana kwezi ntsuku kwiGearBest kwaye kwenye indawo yewebhusayithi yevenkile yaseTshayina sizakufumana izibonelelo ezinomdla phantse ngokuqhubekekayo, nangona zincinci, apho Kuya kuba nzima kuthi ukubabamba ngaphandle kokuba sinikel 'ingqalelo.
Sele sibonile uninzi lwale mibhiyozo, kwiivenkile ezahlukeneyo zaseTshayina, kwaye njengesincomo sinokukuxelela ukuba uyenze lula kwaye ungangxami. Kwaye kunjalo Unikezelo oluhle kunye nezaphulelo kwizinto ezininzi ziya kufika ngomhla othile weholide, kule meko ngoNovemba 11. Namhlanje sifumana izibonelelo ezinomdla ngokuqinisekileyo ezingazukutshintsha ngokuhamba kwexesha, kodwa mhlawumbi ungathetha malunga neemveliso ofuna ukuzithenga kwaye uhlale ubukele xa behlisa amaxabiso abo nangakumbi.
Lumka nekhadi lakho lebhanki, ukuba kolu hlobo lwemibhiyozo ugqibela ngokuthenga izinto ezingafunekiyo kwaye kuba zinexabiso eliphantsi kakhulu. Kwiintsuku kamva, xa befika ekhaya, umntu uyazisola ngokubhiyozela uSunles woSuku ngesitayile, kwaye ngamanye amaxesha inkqubo enzima yokubuyisa yonke into esingayifuniyo nesiyithengileyo siyokuthenga iyaqala.
Zeziphi izibonelelo ozifumeneyo ezinomdla kuninzi ngeli xesha esinokulufumana kwiGearBest?.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ezi zezona zinikezelo zibalaseleyo zangoNovemba 11 kwiGearBest